Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Eziokwu na-adọrọ mmasị, na-atọ ụtọ gbasara Caribbean
Caribbean bụ ebe okpomọkụ mara maka oke osimiri na-acha ọcha, ogologo ụbọchị, abalị dị jụụ, na ohere njem nlegharị anya. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ihe na mpaghara karịa ihe ndị ahụ. Ma ị na-eme atụmatụ ezumike n'ebe ahụ ma ọ bụ na ị nwere mmasị ịmụtakwu banyere ebe dị iche iche si gburugburu ụwa, ebe a bụ ụfọdụ ihe na-adọrọ mmasị banyere Caribbean nke ị nwere ike ịmaghị.
Ọ bụ ebe njem ụgbọ mmiri na-ewu ewu
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịga ihe dị ka ebe ọ bụla n'ụwa n'ụgbọ mmiri, ọ ga-esiri gị ike ịchọta ahịrị ụgbọ mmiri na-enweghị ma ọ dịkarịa ala otu ngwugwu na-aga na Caribbean, yana nke kachasị ewu ewu. ịbụ ụgbọ mmiri ọwụwa anyanwụ Caribbean. Ọbụna njem njem na-elekwasị anya na ebe ndị ọzọ nwere ike ịgụnye ọdụ ụgbọ mmiri Caribbean ole na ole.
O buru ibu Ka I nwere ike iche
Ọ bụ ezie na United States nwere ihe onwunwe na ókèala na Caribbean, ndị mmadụ na-echekarị na ọ bụ ihe dị iche na nke mba ọzọ na United States. Agbanyeghị, enwere ike were Florida dịka akụkụ nke Caribbean, nke pụtara na ụgbọ mmiri ọ bụla ga-esi n'ọdụ ụgbọ mmiri Florida pụọ. teknụzụ ụgbọ mmiri Caribbean n'agbanyeghị ebe a na-aga. Ihe ndị mmadụ na-echekarị dị ka Caribbean nwere ihe karịrị agwaetiti 7,000 (ọtụtụ ndị mmadụ na-ebighị) na 9% nke oke osimiri coral niile dị n'ụwa. Mesoamerican Barrier Reef bụ nke abụọ naanị na Great Barrier Reef na Pacific n'ogo. N'ụzọ dị mwute, coral reef na gburugburu ụwa na-ebelata.
Enwere Omenala Amanaala Ọtụtụ
Arawak na Tainos bụ naanị otu ụmụ amaala abụọ sitere na agwaetiti Caribbean. Ndị a bụ ìgwè abụọ Christopher Columbus zutere na njem ya na narị afọ nke 15 iji chọta ụzọ dị nkenke iji gaa India site na Europe. Ndụ ụmụ amaala bịara sie ike karị n'ihi ịchịisi. Ma ndị mmadụ ma omenala ha lanarịrị. Ka o sina dị, ha ka dị mkpa maka ọdịnala obodo nke agwaetiti ndị ahụ ruo taa.
Oge dị iche iche
N'ebe ndị dị elu, a na-ekewa afọ n'ime oge anọ pụrụ iche. Na Caribbean, ebe okpomọkụ na-adịkarịghị adaba n'okpuru ogo 80, enwere naanị oge abụọ, ọ bụghị site na okpomọkụ kama site na mmiri ozuzo. Oge okpomọkụ na-aka mmiri mgbe oyi na-akọrọ. Nke a na-eme ka ọ dị mma maka ndị njem nleta na-achọ ezumike site na oyi na snow.
Enwere ugwu mgbawa na-arụ ọrụ
Ọ bụghị agwaetiti Caribbean niile bụ ugwu mgbawa. Otú ọ dị, n'ime ndị ahụ, e nwere 19 ndị nwere ike ịgbawa ọzọ n'oge ụfọdụ, n'oge na-adịghị anya, na-eme ka ha dị ndụ. Nke ahụ apụtaghị na ha na-agbawa mgbe niile, a pụghịkwa ikwu kpọmkwem mgbe mgbawa ga-eme. Ụfọdụ n'ime ebe mgbawa ugwu dị na Caribbean gụnyere agwaetiti St. Kitts na Nevis, Dominica, St. Lucia, Grenada, St. Vincent, na Martinique. Àgwàetiti ndị ọzọ na-abụghị ugwu mgbawa dị n'ebe dị nso bụ usoro echiche n'ihe ize ndụ nke mbufịt mbufịt, ọdịda ntụ, na ihe egwu mgbawa ugwu ndị ọzọ.
Ezi ezi ejirila otu n'ime agwaetiti ahụ
Exuma bụ agwaetiti na-enweghị onye bi nke bụ akụkụ nke Bahamas. Ndị mmadụ na-ebighị, ya bụ, ma ọ bụ ebe obibi nke ezì feral. Ndị Europe na-achị achị butere ezì ndị a na Caribbean, ma o doghị anya otú ha si bịa n'àgwàetiti ahụ. Ihe doro anya bụ na ha na-enwe mmasị iji ụbọchị ha nọrọ n'akụkụ osimiri, na-egwu mmiri na mmiri ka ọ dị jụụ. Enwere njem nlegharị anya na-aga ndị ọbịa n'agwaetiti ndị ahụ ka ha hụ ezì dị nso. I nwedịrị ike iso ha na-akwọ ụgbọ mmiri ma ọ bụrụhaala na ị na-anọ ebe dị anya n'ụzọ nkwanye ùgwù.
Ọ bụ ebe a mụrụ Rum
N'akụkọ ihe mere eme, Caribbean bụ onye na-emepụta okpete, bụ nke a na-eme ka ọ bụrụ rọm. Mmụọ aṅụrụma abụrụla akụkụ akụ na ụba nke mpaghara ahụ kemgbe ahụ, ebe agwaetiti mbụ a maara na-emepụta ya na azụmahịa bụ Jamaica.
Caribbean bụ mpaghara ochie na nke dị iche iche nwere mgbagwoju anya mana ọ na-atọ ụtọ n'oge gara aga. O nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye ndị na-ahọrọ ileta, na ọbụna ndị na-enweghị ike irite uru n'ịmụtakwu banyere ya.
Anna ekwu, sị:
November 6, 2021 na 14: 38
Exuma bụ agbụ nke agwaetiti 365 a na-akpọ cays ndị na-abụghị ndị mmadụ, n'ezie enwere ihe dị n'etiti mmadụ 7000 ruo 8000 bi na isi agwaetiti, Great Exuma, na n'agwaetiti ndị ọzọ nke yinye….
E tinyela ezi n'àgwàetiti gbahapụrụ agbahapụ tupu 2000 NYE mgbe ndị mmadụ niile kwenyere na ụwa na-abịa na njedebe ma na-akwakọba nri n'ụzọ ahụ. Ndị ọrụ ụgbọ mmiri kwụsịrị n'ọnụ mmiri ahụ wee malite ịse foto ezi ndị a wee gbasaa okwu ahụ n'ụwa njem nlegharị anya wee bụrụ ihe na-adọrọ mmasị….